Techclean | Kuchenesa Franchise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»Techclean Franchise
Techclean akatanga kutengeserana muna 1983 uye vava UK inotungamira nyanzvi muhurongwa hwehutsanana. Tekinoroji inogona kuiswa nyore seimba yepamhepo franchise uye semabhenefiti akadaro kubva pamitengo yepasi pasi yekushandura iyo inoshandura mumakwenzi akakwirira uye anogara. Kuchenesa data nzvimbo, nzvimbo dzekushandira uye nezvimwe zvakadaro zvinoda hunyanzvi ruzivo uye hunyanzvi uye tinopa huwandu hwakakwana hwegadziriro yekuchenesa mhinduro kune vatengi vakasiyana kubva kuFTSE 100 kune hurumende kumabhizinesi emuno, masangano, zvikoro uye kunyangwe zvigadzirwa zvekurapa, pakati pevamwe. Isu tinoshambidza nzvimbo dzekubasa, laptops, maprinta, mapikicha, fakisi michina, scanners, nhare, EPOS, kusanganisa madesiki, maATM uye mamwe akawanda ehurongwa hwekuparadza. Techclean zvakare mutungamiriri wemusika mukuchenesa Computer Suites, Dzimba Rooms & Kukurukura Centers, aine nzira yakaedzwa uye yakaedzwa yekucheneswa uku kuchenesa. Isu tiri kungogara takatarisa kuburitsa zvishandiso zvitsva uye kuona mitsva yemitsva yemari kune rakabudirira bhizinesi uye humwe hunyanzvi hwekupa kana kukanganisa sevhisi kune vatengi. Chigadzirwa chedu hachina-carcinogenic (chakagadziriswa kubva pamasikirwo maitiro) uye chinobvisa 99.999% yezvose zvinokonzerwa nemhepo.
Yakanakisa mari yekuwedzera
Uye zvakare, isu tichapa zvakavanzika zvinhu saiti sevhisi kumakambani makuru uye madiki seimwe basa rekuwedzera. Techclean inoyedza kuve revatengi-centric bhizinesi inopa mazano uye zvinoshanda mhinduro kune vatengi vedu uye inozivikanwa sechiremera mune ino chikamu nemaitiro akasimba ekuchenesa maitiro uye maitiro anoshandisa zvigadzirwa zvakasiyana Techclean. Techclean inopa imwe yakanakisa kukosha franchise mikana iripo.Tarira Vhidhiyo
Techclean ndeye yakakwana switchkey mashandiro ane yekupinda mutengo we- $ 19,500 + VAT. Isu tinopa rakazara bhizinesi rakamiswa-kumusoro iro rinosanganisira, asi haringopiwi kune:
Kudzidziswa - zvose kuHofisi Hofisi uye neiyo iripo mafurati.
Yakakwana Kushambadzira Launch Chirongwa.
Yakawanda yekutanga-up zvigadzirwa uye michina.
Yakazara yeuwandu hwekuwedzera kushambadzira uye bhizinesi collar.
Software maneja manejimendi.
Kuenderera mberi nerutsigiro kubva kuHofisi Hofisi timu neanopfuura makore makumi manomwe emakore 'ruzivo mukufambisa.
Tekinoroji masisitimu uye kushambadzira zvinyorwa.
Centralised Appointment Generation mushandirapamwe.
Yakadzika Mashandiro Ekushandisa
Techclean riri bhizinesi rinogona kuwanikwa nyore nyore pamba nokudaro rinobvisa mutengo webhizimusi rendi uye mitengo. Vamwe vedu franchisees zvisinei vanofarira zvavo Techclean unit. Chero ipi yaunoda kusarudza iwe uchazoda yako yako 'hofisi nzvimbo', iyo nzvimbo diki yekuchengetera sitoku uye zvinopihwa, PC yekufambisa kutonga kwebhizinesi rako uye bhizinesi landline.
Mikana Inokosha Yekubatsirwa
Tekinoroji nemaune riri bhizinesi rine mutengo wakaderera - hapana rendi, hapana mitengo uye vashandi vanobhadharwa sezvavanoitwa uye pabasa. Franchisees inotaura mambure echitenderera anosvika 60%. Ne zvigadzirwa zvitsva zvinowedzerwa, mitsva yemari yemari inogadzirwa uye musika wekukura musika, marangi emari anoiswa kuti agare akasimba. Tiri kutsvaga vanhu vari:
Vakanaka kutaurirana uye vanonakidzwa kuvaka hukama nevatengi.
Kurangwa uye kunyatsorongeka.
Kugadzirira kuisa mukati mebasa rakaoma kuvaka bhizinesi.
Kugona uye kuda kutevedzera bhizinesi system.
Nechepfungwa, iwe unofanirwawo kuve nehunyanzvi hwekutengesa uye kushambadzira, kunakidzwa nekutarisa zvikwata uye kuve nehupamhi hwepamusoro basa. Techclean tsika inoshandira rakawandisa revatengi uye inopa yakazara basa kune vatengi vedu. Izvo hazvingave zvisingashamisi kuti franchisee ive yekushandira dhipatimendi rehurumende rimwe zuva, kuenda kuchikoro chinotevera nekuchenesa imba yedata mukambani yeFTSE100 pane yechitatu. Nekudaro, iwe unofanirwa kukwanisa kuseta mabasa, kuronga, kuronga nekukoshesa mabasa uye kuve wakasununguka kubata rakawanda revatengi. Musika we Techclean mabasa akakura. Upamhi hwevatengi hwakakura. Kuwanda kwemari inotenderera kunonakidza. Iwe unenge uchibatana nebhizinesi rine mukurumbira kuratidzwa kwekubudirira, hupenyu hurefu mumusika uye zvinoshamisa mhindu yemari uye iwe uchave uchibatana nechikwata chinozvipembedza pachayo nhoroondo yefranchising, pamabhizimusi ehurongwa hwayo uye zvakanyanya kukosha pane mukurumbira wayo wekutsigira maFrancisees kwese. basa ravo rebhizimusi.